Home Health & Beauty စိုထိုင်းတဲ့နေရာတွေမှာ မှိုတွေရှိတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ
မှိုဆိုတာ ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အိမ်တွင်း၊ အိမ်ပြင် ဘယ်နေရာမဆို ရှိနိုင်ပါတယ်။ မြေအောက်ခန်း၊ ရေချိုးခန်း စိုထိုင်းတဲ့နေရာတွေမှာ များစွာဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီး ဒီမှိုတွေရှိနေရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက် မကောင်းတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပန်းနာရင်ကြပ် ဒါမှမဟုတ် အသက်ရှူလမ်းကြောင်ဆိုင်ရာရောဂါများ နဲ့ အခြားရောဂါများစွာဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
ကိုယ်နေထိုင်တဲ့နေရာမှာ မှိုတွေရှိနေတဲ့အခါ /မှိုနဲ့ ထိတွေ့မှုရှိတဲ့အခါ သင့်မျက်လုံးက ယားယံခြင်း၊ နီမြန်ခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်း စတဲ့ ရောဂါလက္ခာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ အခန်း/ မိမိရဲ့ နေထိုင်တဲ့ နေရာတစ်ဝှိုက်မှာ မှိုရှိနေရင် ဒါမှမဟုတ် မှိုနဲ့ ထိတွေ့မှုရှိတဲ့အခါ အရေပြားခြောက်သွေ့ယားယံခြင်းအပြင် အခြားသူတွေကိုပါ ယားယံခြင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကြာသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ နှင်းခူကဲ့သို့ အရေပြားရောဂါမျိုးဖြစ်တတ်ပြီး အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ
မှိုနဲ့ ထိတွေ့မှုရှိတဲ့အခါ အအေးမိလို နှာရည်ယိုခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ နှာရည်များကျလာတတ်ပါတယ်။
မှိုနဲ့ ထိတွေ့ပြီး ဓာတ်မတည့်တဲ့ခါ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ ဒါမှမဟုတ် ချောင်းဆိုးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါရှိသူတွေအတွက် မှိုနဲ့ ထိတွေ့တဲ့အခါ ပိုပြီး ရောဂါဝေဒနာပိုဆိုးစေပါတယ်။ ဒီလို ပန်းနာရင်ကြပ်ရှိတဲ့သူတွေ အထူဂရုစိုက်ရှောင်ကြဉ်သင့်ပြီး လေ့လာမှုတွေအရလည်း ပန်းနာရင်ကြပ်ရှိတဲ့သူတွေဟာ ရောဂါလက္ခဏာပိုဆိုးစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာတော့ အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပေမဲ့ ဘာကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တယ်ဆိုတာ တိတိကျကျသိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မှိုနဲ့ ထိတွေ့မှုရှိတဲ့သူတွေဟာ ဘာကြောင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ဆိုတာ တိတိကျကျ မပြောပြနိုင်ပါဘူး။ အခြားပင်ပန်းနွမ်းနယ်စရာ အကြောင်းမရှိပဲ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး ငြီးငွေ့ဖွယ် ခံစားရနေတယ်ဆိုရင် သင်ဟာမှိုနဲ့ ထိတွေ့မှုရှိခဲ့လိုပဲဖြစ်ပါတယ်။
မှိုကြောင့် ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုတာ ရှားတော့ရှားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိမိရဲ့ နေတဲ့အခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ အစိုဓာတ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာ မှိုရှိနေရင်တော့ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်းထိုးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အစိုဓာတ်ရှိတဲ့နေရာတွေ၊ မှိုတွေရှိတဲ့နေရာတွေကို အမြဲသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိရဲက အခန်းကိုလည်း လေဝင်လေထွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ စိုထိုင်းမှုမရှိအောင် ထိန်းသိမ်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ရေနွေးလား၊ ရေခဲရေလား? သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အရာတွေကို ကြည့်ပြီး ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ပါ
စိုထိုငျးတဲ့နရောတှမှော မှိုတှရှေိတဲ့အခါ ဖွဈပျေါတတျတဲ့ ရောဂါလက်ခဏာ
မှိုဆိုတာ ကြှနျတျောတို့နထေိုငျတဲ့ ပတျဝနျးကငျြ၊ အိမျတှငျး၊ အိမျပွငျ ဘယျနရောမဆို ရှိနိုငျပါတယျ။ မွအေောကျခနျး၊ ရခြေိုးခနျး စိုထိုငျးတဲ့နရောတှမှော မြားစှာဖွဈပျေါတတျပွီး ဒီမှိုတှရှေိနရေငျတော့ကြှနျတျောတို့အတှကျ မကောငျးတဲ့ ရောဂါလက်ခဏာတှဖွေဈပျေါလာနိုငျပါတယျ။ ပနျးနာရငျကွပျ ဒါမှမဟုတျ အသကျရှူလမျးကွောငျဆိုငျရာရောဂါမြား နဲ့ အခွားရောဂါမြားစှာဖွဈပျေါတတျပါတယျ။
ကိုယျနထေိုငျတဲ့နရောမှာ မှိုတှရှေိနတေဲ့အခါ /မှိုနဲ့ ထိတှမှေု့ရှိတဲ့အခါ သငျ့မကျြလုံးက ယားယံခွငျး၊ နီမွနျခွငျး၊ မကျြရညျကခြွငျး စတဲ့ ရောဂါလက်ခာတှဖွေဈပျေါတတျပါတယျ။
မိမိရဲ့ အခနျး/ မိမိရဲ့ နထေိုငျတဲ့ နရောတဈဝှိုကျမှာ မှိုရှိနရေငျ ဒါမှမဟုတျ မှိုနဲ့ ထိတှမှေု့ရှိတဲ့အခါ အရပွေားခွောကျသှယေ့ားယံခွငျးအပွငျ အခွားသူတှကေိုပါ ယားယံခွငျး ဖွဈတတျပါတယျ။ ကွာသှားတဲ့အခါမြိုးမှာ နှငျးခူကဲ့သို့ အရပွေားရောဂါမြိုးဖွဈတတျပွီး အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ
မှိုနဲ့ ထိတှမှေု့ရှိတဲ့အခါ အအေးမိလို နှာရညျယိုခွငျးမြိုးမဟုတျဘဲ နှာရညျမြားကလြာတတျပါတယျ။
မှိုနဲ့ ထိတှပွေီ့း ဓာတျမတညျ့တဲ့ခါ ပနျးနာရငျကွပျရောဂါ ဒါမှမဟုတျ ခြောငျးဆိုးခွငျးကို ဖွဈပျေါတတျပါတယျ။
ပနျးနာရငျကွပျရောဂါရှိသူတှအေတှကျ မှိုနဲ့ ထိတှတေဲ့အခါ ပိုပွီး ရောဂါဝဒေနာပိုဆိုးစပေါတယျ။ ဒီလို ပနျးနာရငျကွပျရှိတဲ့သူတှေ အထူဂရုစိုကျရှောငျကွဉျသငျ့ပွီး လလေ့ာမှုတှအေရလညျး ပနျးနာရငျကွပျရှိတဲ့သူတှဟော ရောဂါလက်ခဏာပိုဆိုးစတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ပငျပနျးနှမျးနယျတာတော့ အခွအေနအေမြိုးမြိုးကွောငျ့ ဖွဈပှားလရှေိ့ပမေဲ့ ဘာကွောငျ့ ပငျပနျးနှမျးနယျတယျဆိုတာ တိတိကကြသြိရှိနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ မှိုနဲ့ ထိတှမှေု့ရှိတဲ့သူတှဟော ဘာကွောငျ့ပငျပနျးနှမျးနယျဆိုတာ တိတိကကြ မပွောပွနိုငျပါဘူး။ အခွားပငျပနျးနှမျးနယျစရာ အကွောငျးမရှိပဲ ပငျပနျးနှမျးနယျပွီး ငွီးငှဖှေ့ယျ ခံစားရနတေယျဆိုရငျ သငျဟာမှိုနဲ့ ထိတှမှေု့ရှိခဲ့လိုပဲဖွဈပါတယျ။
မှိုကွောငျ့ ခေါငျးကိုကျတယျဆိုတာ ရှားတော့ရှားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ မိမိရဲ့ နတေဲ့အခနျး၊ ရခြေိုးခနျး၊ အစိုဓာတျရှိတဲ့နရောတှမှော မှိုရှိနရေငျတော့ ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ ခေါငျးတဈခွမျးထိုးခွငျးကို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ အစိုဓာတျရှိတဲ့နရောတှေ၊ မှိုတှရှေိတဲ့နရောတှကေို အမွဲသနျ့ရှငျးရေးလုပျဖို့လိုအပျပါတယျ။ မိမိရဲက အခနျးကိုလညျး လဝေငျလထှေကျကောငျးကောငျးနဲ့ စိုထိုငျးမှုမရှိအောငျ ထိနျးသိမျးပေးဖို့လိုအပျပါတယျ။
Previous articleရေနွေးလား၊ ရေခဲရေလား? သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အရာတွေကို ကြည့်ပြီး ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ပါ
Next articleဘောင်းဘီတို၊ စကပ်တိုလေးတွေဝတ်ချင်ပေမဲ့ အသားရေကမလှ၊ အချိုးအစားကမကျလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ပျိုမေတွေအတွက်